Kedu ka ike ikuku si arụ ọrụ: mmịpụta na ojiji | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Kedu ka ike ikuku si arụ ọrụ
N'ihi asọmpi dị elu na arụmọrụ ka ukwuu nke ume ọhụrụ, ọ na-adịwanye efu na ahịa ụwa. E nwere ọtụtụ ụdị nke ume ọhụrụ (echere m na anyị niile maara nke a), mana n'eziokwu, n'ime ihe a na - emegharị emegharị, anyị achọtala ihe ndị ọzọ 'ama ama', dịka ike anyanwụ na ikuku, yana ike ume ndị ọzọ amachaghị dịka ike geothermal. Ọtụtụ ndị amabeghị ka ike ikuku mmiri si arụ ọrụ.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara etu ike ikuku si arụ ọrụ yana etu o si dị mkpa.
1 Ike ikuku
2 Kedu ka ike ikuku si arụ ọrụ: mmịpụta
2.1 Osimiri geothermal
2.2 Mmiri mmiri ọkụ
3 Otu Egwuregwu Geothermal Si Arụ Ọrụ: Ike Geothermal Plant
Tupu anyị mara otú ike ikuku si arụ ọrụ, anyị ga-amarịrị ihe ọ bụ. Ike nke Geothermal bu ihe eji eme ka emegharia ohuru nke eji oku nke di na ala n'okpuru ala. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ na-eji okpomọkụ sitere n’ígwé dị n’ime ụwa eme ihe ma na-ewepụta ume na ya. Ike mmeghari ume na-ejikarị ihe ndị dị na mpụga dịka mmiri, ikuku, na ìhè anyanwụ. Agbanyeghị, ike ikuku na-enye ume bụ naanị ike sitere na enweghị usoro mpụga a.
Enwere gradient okpomọkụ dị n'ime ala ebe anyị na-azọ ụkwụ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, okpomoku nke ụwa ga na-abịarukwa nso n’ime ala nke ụwa ka anyị na-agbada. Ọ bụ eziokwu na omimi kacha omimi nke ụda mmadụ ga-eru anaghị akarị kilomita iri na abụọ, mana anyị maara nke ahụ ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ga-amụba okpomọkụ nke ala site na 2 Celsius C na 4 Celsius ọ bụla na 100 mita. Ndaghari nke mpaghara di iche-iche di iche-iche kariri karie, nihi na ekwenti jikoro ebe a. Ya mere, ime ala nke kachasị n’ime ụwa (dịka uwe na-ekpo ọkụ) kachasị nso n’elu ụwa ma na-enyekwu okpomọkụ.
Kedu ka ike ikuku si arụ ọrụ: mmịpụta
Anyị ga-edepụta nke bụ isi iyi mmịpụta iji ghọtakwuo otu ike ọkụ si arụ ọrụ.
A na-ahụkarị gradi gram dị omimi na mpaghara ụfọdụ nke ụwa karịa ka ndị ọzọ. Nke a na - eduga n'ịrụ ọrụ ike na nrụpụta ike site na okpomoku nke ụwa. N'ozuzu, ikike mmepụta nke ike ikuku dị ala karịa nke ike anyanwụ (60 mW / m² maka ike geothermal na 340 mW / m² maka ike anyanwụ). Agbanyeghị, ebe gradient a kpọtụrụ aha dị elu (nke a na-akpọ mmiri na-ekpo ọkụ), ike nrita nwere ike karie elu (ihe ruru 200 mW / m²). Nnukwu ikike mmepụta ume a na-ebute ikpo ọkụ na aquifer, nke enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ.
Iji wepu ume site na mmiri na-ekpo ọkụ, a ghaghị ibu ụzọ mee nchọpụta ahịa ahịa, n'ihi na ọnụahịa mkpọpu na-abawanye ụba na omimi. Nke ahụ bụ, ka anyị na-egwu ala miri emi, mgbalị ịdọrọ okpomọkụ n'elu na-abawanye. N'etiti ụdị nchekwa nke ala, anyị achọtala ụdị atọ: mmiri ọkụ, mineral akọrọ na geysers.
E nwere ụdị mmiri mmiri ọkụ iri abụọ: mmiri iyi na mmiri dị n’ime ala. Enwere ike iji nke mbụ dị ka ịsa ahụ na-ekpo ọkụ site na ịgwakọta ha ntakịrị na mmiri oyi iji nwee ike ịsa ahụ na ya, mana nke mbụ nwere nsogbu nke mmiri ya dị ala. N'akụkụ aka nke ọzọ, anyị nwere aquifers n'okpuruala, nke bụ ọdọ mmiri nwere oke okpomọkụ na oke omimi. Enwere ike iji ụdị mmiri a wepụ okpomọkụ gị. Anyị nwere ike ịgbasa mmiri ọkụ site na mgbapụta iji nweta okpomọkụ ya.
Nkwụnye akọrọ bụ ebe nkume dị ma kpoo ọkụ. N'ime ụdị ọdọ mmiri a enweghị mmiri na-eburu ike ikuku ma ọ bụ ụdị ihe ọ bụla na-emebi emebi. Ọ bụ ndị ọkachamara gosipụtara ụdị ihe ndị a ka ha nyefee okpomọkụ. Ala ndị a nwere obere mmepụta na nrụpụta nrụpụta dị elu. Ihe ọghọm nke ụdị ubi a bụ na teknụzụ na akụrụngwa maka omume a ka bụ ndị anaghị ahụ maka akụ na ụba, yabụ na a ga-etolite ma melite.
Geyser bụ isi mmiri na-ekpo ọkụ nke na-ewepụta otu kọlụm nke uzuoku na mmiri ọkụ. Ole na ole na mbara ala a. N'ihi enwe mmetụta nke gysers, a ga-eji gysers mee ihe n'ụzọ dị oke mma ma kpachara anya ka ọ ghara ibelata arụmọrụ arụmọrụ ha. Iji wepu okpomọkụ site na mmiri giiza, a ghaghị iji ọkụ ahụ mee ihe kpọmkwem site na turbine iji nweta ike igwe.
Nsogbu dị na mmịpụta a bụ na ịtinye mmiri na obere okpomọkụ ga-eme ka magma dị jụụ ma mebie ya. A na-enyochakwa ya na ntụtụ nke mmiri oyi na ịjụ oyi nke magma na-akpata obere ala ọma jijiji na mgbe mgbe.
Otu Egwuregwu Geothermal Si Arụ Ọrụ: Ike Geothermal Plant
Iji mata ka ikuku ikuku si arụ ọrụ anyị ga - agarịrị na ọkụkụ ọkụ na - arụ ọrụ. Ha bụ ebe a na-eme ụdị ike a. Ọrụ nke ụlọ ọrụ ike nke ikuku na-adabere na ọrụ dị mgbagwoju anya nke na-arụ ọrụ usoro ihe-ubi. Nke ahụ bụ, a na-ewepụta ume site na ime ụwa ma buru ya gaa na osisi ebe ọkụ eletrik na-eme.
Igwe okpomoku nke ikuku geothermal nke ị na-arụ ọrụ dị elu karịa ụwa nkịtị. Nke ahụ bụ, ọnọdụ okpomọkụ dị omimi na-arịwanye elu. Mpaghara a nke nwere gradient geothermal dị elu n'ozuzu ya bụ n'ihi ọnụnọ nke aquifer na-ejedebe site na mmiri ọkụ, na aquifer na-echekwa ma gbochie ya site na oyi akwa a na-apụghị imeri emeri nke na-egbochi okpomọkụ na nrụgide niile. Nke a bụ ihe a na-akpọ ọdọ mmiri, nke a na-ewepụta okpomọkụ iji nye ọkụ eletrik.
Olulu mmiri na-ekpo ọkụ nke jikọtara na osisi ike dị na mpaghara ndị a. A na-amịpụta uzuoku ahụ site na ntanetị nke ọkpọkọ ma duga ya na ụlọ ọrụ ebe ọkụ ọkụ nke uzuoku na-agbanwe n'ime ike ọrụ wee banye ike eletrik. Ozugbo anyị nwere ike eletrik, anyị ga-ebuba ya ebe eji.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu ike ọrụ ikuku si arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike ikuku » Kedu ka ike ikuku si arụ ọrụ
Ihe 5 nke okike